तपाईंको लागि यो हप्ता कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् हप्ताको साप्ताहिक राशिफल ! – Khabar Silo
अपूर्ण रहेका केहि महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुने सम्भावना छ । केहि नयाँ कार्य सुरु गर्दा पनि निकै राम्रो फल प्राप्त हुने योग रहेको छ । विवाहिक जीवनमा भने केहि समस्या आउन सक्छ । व्यापार व्यवसायमा पनि राम्रो फल मिल्नेछ, तर निकै कठिन मिहेनत गर्नु पर्नेछ । यो हप्ता तपाईंको आम्दानीमा वृद्धि हुने सम्भावना छ भने खर्च पनि उत्तिकै हुन सक्छ । स्वास्थको हिसाबले यो हप्ता ठिक ठाक रहनेछ ।
यो हप्ता आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा केहि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोला । स्वास्थको हिसाबले पनि यो हप्ता त्यति राम्रो छैन । स्वास्थमा समस्या आउन सक्छ, सतर्क रहनुहोला । पारिवारिक सम्बन्धमा केहि खटपट आउन सक्छ । तपाईंको रिसले गर्दा सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने हुँदा निकै ध्यान दिनुहोला ।
व्यापार व्यवसायमा निकै राम्रो फल प्राप्त हुनेछ । सुन,चाँदी तथा काठको व्यापार गर्नुहुन्छ भने यो हप्ता तपाईंलाई निकै लाभदायक हुन्छ । यो हप्ता लेन देनको काम नगरेकै राम्रो हुनेछ । स्वास्थमा समस्या आउन सक्ने भएकोले आफ्नो खानपिनमा ध्यान दिनुहोला । कुनै पनि प्रकारको व्यापार सुरु गर्न यो हप्ता निकै शुभ रहेको छ ।
सानो भन्दा सानो लापरवाहीले पनि ठुलो नुक्सान हुनसक्ने भएकोले कुनै पनि काम गर्दा सतर्क रहनुहोला । नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरु गर्दा भाग्यको पूरा साथ तपाईंसँग हुनेछ । समाजमा मान-सम्मान बढ्ने योग रहेको छ । दाम्पत्य जीवनमा केहि समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । स्वास्थमा सुधार आउनेछ ।
यो हप्ता तपाईंलाई जस्तो सुकै अवस्थामा पनि भाग्यले साथ दिनेछ । पदोन्नतीको योग रहेको छ । व्यापार व्यवसायबाट भने सोचे जस्तो फल प्राप्त नहोला । व्यक्तिगत जीवनमा केहि गम्भीर सामस्या आउन सक्छ, सावधान रहनुहोला । विवाह सम्बन्धि कुरा लिएर घर परिवारबाट दबाब सृजना हुनसक्छ । शरीरमा घाउ चोट लाग्ने सम्भावना रहेकोले सवारी गर्दा निकै ध्यान दिनुहोला ।
यो हप्ता पारिवारिक जीवनमा निकै ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । दाम्पत्य जीवनमा केहि समस्या छ भने त्यसको समाधान हुनेछ । आर्थिक रूपले यो हप्ता निकै राम्रो छ । नोकरी बदल्न चाहानुहुनेलाई पनि यो हप्ता निकै शुभ रहेको छ । निवास स्थानमा परिवर्तन हुन सम्भावना रहेको छ । स्वास्थको हिसाबले यो हप्ता अनुकूल रहेको छ ।
स्वास्थमा केहि समस्या आउन सक्ने भएकोले, सतर्क रहन जरूरी छ । आर्थिक रूपले यो हप्ता सामान्य रहनेछ । व्यापार व्यवसायमा ठिक ठाक सफलता मिल्नेछ । पारिवारिक सम्बन्ध भने अनुकूल नहुन सक्छ । सन्तानबाट भने खुसी तथा सुख प्राप्त हुने योग रहेको छ । कर्यक्षेत्रमा आफु भन्दा ठुलाको सहयोग मिल्नेछ ।
रचनात्मक क्षेत्रमा काम गनेको लागि यो हप्ता निकै राम्रो रहेको छ । यात्राको योग रहेको छ । यो हप्ता आर्थिक समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । साथी-भाईसँग भेटघाट हुने सम्भावना रहेको छ । पारिवारिक जीवन अनुकूल रहनेछ । त्यस्तै स्वास्थमा पनि सुधार आउनेछ । लेन-देनको लागि यो हप्ता अशुभ रहेकोले लेन-देन कार्य नगर्नुनै राम्रो हुनेछ ।
धनु राशि हुनेको लागि यो हप्ता अत्यन्त शुभ रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा तथा व्यापारमा लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ । तपाईं कुनै पनि प्रकारको कानूनी मुद्दामा फस्नु भएको छ भने पनि यो हप्ता छुटकारा मिल्नेछ । आफ्नो जीवनसाथीसँग भने यो हप्ता टाडा नै बस्नु पर्नेछ । स्वास्थको हिसाबले पनि यो हप्ता निकै शुभ रहेको छ ।
व्यापार क्षेत्र यो हप्ता सामान्य रहनेछ । कर्यक्षेत्रबाट सम्मान प्राप्ति हुने सम्भावना रहेको छ । पारिवारिक जीवनमा कलह बढ्न सक्छ । बुबाको स्वास्थमा समस्या आउन सक्छ । आर्थिक सफलता प्राप्त गर्न भने निकै कडा परिश्रम गर्नु पर्नेछ । आम्दानी भन्दा खर्च बढि हुँदा चिन्ता बढ्नेछ । यो हप्ता तपाईं मौसमी बिमारीको सिकार हुनसक्ने सम्भावना रहेकोले आफ्नो ख्याल गर्नुहोला ।
नकारात्मक सोचको कारण सम्बन्धमा खटपट आउन सक्छ । परिवारबाट भरपूर सहयोग मिल्नेछ । यो हप्ता अत्धियाक खर्च हुने देखिन्छ । व्यापारमा आफ्नो नजिकको मानिसको सहयोग प्राप्त हुनेछ । हप्ताको अन्तिममा स्वास्थमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
शिक्षामा केहि उतार-चाडव आउन सक्छ । जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध निकै सुमधुर हुनेछ । केहि अपूर्ण काम छन् भने पनि यो हप्ता सम्पन्न हुने पूरा सम्भावना रहेको छ । आर्थिक रूपले पनि यो हप्ता अत्यन्त शुभ रहेको छ । खर्च थोरै हुनेछ भने आम्दानीमा सुधार आउनेछ । लेन-देनको काम गर्न पनि यो हप्ता निकै शुभ रहेको छ । स्वास्थमा भने केहि समस्या आउन सक्छ ।
वि.सं.२०७६ साल कात्तिक ०१ गते । शुक्रवार । इस्वी सन् २०१९ अक्टोबर १८ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ । परिधावी संवत्सर । दक्षिणायन । शरद ऋतु । श्रीशाके १९४१ । कार्तिक कृष्ण पक्ष । तिथि पञ्चमी,५७ घडी २९ पला,रातको ०५ बजेर ०५ मिनेट उप्रान्त षष्ठी । नक्षत्र रोहिणी,२४ घडी ३८ पला,दिउसो ०३ बजेर ५७ मिनेट […]